२५ प्रतिशत मतदान : हाइप्रोफाइल उम्मेदवार, कसले कहाँबाट मतदान गरे ? – Saurahaonline.com
२५ प्रतिशत मतदान : हाइप्रोफाइल उम्मेदवार, कसले कहाँबाट मतदान गरे ?
काठमाडौँ,१० मंसिर । आज देशभरका ३२ जिल्लामा प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन जारी छ। अहिले सम्म देशभर २५ प्रतिशत मतदान भएको छ । पहिलो चरणको निर्वाचनमा सहभागी हाइप्रोफाइल नेता तथा उम्मेदवारहरुले पनि आ(आफ्नो मतदान केन्द्रमा पुगेर मतदान गरेका छन्।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा लोकतान्त्रिक गठबन्धनका तर्फबाट गोरखा क्षेत्र नम्बर २ मा प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवार डा। बाबुराम भट्टराईले गोरखाको पालुङटार नगरपालिका ( १ को अन्नपूर्ण मावि खोप्लाङ केन्द्रमा मतदान गरेका छन्। उनले केहि समय लाइनमा बसेर मतदान गरेका थिए।
माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार नारायणकाजी श्रेष्ठले मतदान गरेका छन्। गोरखा सिरानचाक गाउँपालिका ८ जौबारस्थित परोपकार आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय मतदान केन्द्रबाट श्रेष्ठले मत दिएका हुन्। उनी गोरखा २ बाट पूर्वप्रधानमन्त्री डा। बावुराम भट्टराईसँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्।